၁။ သံပရာသီးတစ်လုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အခွံနှင့်အတူ အကွင်းလိုက် လှီးလိုက်ပါ။ မတ်ခွက်ထဲကို ထည့်ပါ။ . ၂။ ဂျင်းနှစ်လွာခန့် ထည့်ပါ။ . ၃။ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပါ။ . ၄။ ရေနွေးပူပူထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ . နာရီဝက်ခန့် နှပ်ထားလိုက်ပြီး ရေနွေး အေးလာသည့်အခါ ေျသာက်ပေးနိုင် ပါတယ်။ ညအိပ်ယာဝ...
SPF ဆိုတာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် B ကို ကာကွယ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ပြောတာ။ UVB ဆိုတာ နေလောင်တာကို အဓိကဖြစ်စေတာ။ အဲဒီတော့ နေကာလိမ်းဆေး မလိမ်းရင် နေလောင်တဲ့အချိန်နဲ့ နေကာလိမ်းဆေးလိမ်းထားရင် နေလောင်တာဖြစ်ဖို့ အချိန်ပိုကြာတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ SPF 100 ဟာ SPF 50 ထက် နှစ်ဆပိုကောင်းသလား ----------------------------------------------------------- ...
အဖု၊ အကျိတ်၊ အသားသီးများအတွက် သဘာဝဆေးနည်းများ
အရေပြားပေါ်မှာ အသားသီးများကို အောက်ပါ သဘာဝဆေးနည်းများဖြင့် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ ဆေးနည်း(၁) *************** ကြက်ဆူဆီ ------------ ၁။ ကြက်ဆူဆီကို မုန့်ဖုတ်သည့် ဆော်ဒါရည် အနည်းငယ်နှင့် ရောစပ်ကာ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး အနှစ်ရအောင် ရောသမမွှေပါ။ ၂။ သံပရာဆီ အနည်းငယ်ထည့်...
မျက်ကွင်းညို၍ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် အိမ်တွင်းကု အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝနည်းလေးများကို ကျန်းမာရေးသတင်းများ စာမျက်နှာမှ မျှဝေပေးလိုက်ပါ ရစေနော်။ နည်းလမ်း(၁) -------------- သခွါးသီးကို အကွင်းလိုက်လှီး၍ ရေခဲသေတ္တာထဲ ၁၀ မိနစ်ခန့် အေးအောင် ထည့်ထားပါ။ (ရေခဲသေတ္တာမရှိလျှင်လည်း သခွါးသီးဟာ သဘာဝအတိုင်းအေးပြီးသားမို့ ဒီအတိုင်း သုံး...
အခုခေတ် အမျိုးသမီး တော်တော်များများဟာ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်တွေ စီးကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အပြင်သွားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရုံးကို သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စတိုင် တစ်ခုနေနှင့်သော်လည်း အကျင့်တစ်ခု အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း စီးကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာလည်း အမျိုးသမီးများ ဒေါက်ဖိနပ် စီးခြင်းက စတိုင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေတော့ ဒါကို တားမြစ်ရင်လည်း တားမြစ်တဲ့လူက အမှား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ် စီးခြင်းဟာ မိမိ ခြေထောက်ကို အ...
အလှအတွက် ကြိုးစားလုပ် ကြည့်ရမယ့် အလေ့အကျင့်ကောင်း ၁ဝ ခု
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ နေ့တိုင်း အလှဆုံးဖြစ်ချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှ ဒါက အကျင့်ဆိုးလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ညဘက် မိတ်ကပ်မဖျက် မျက်နှာမသစ်ဘဲ အိပ်တတ်တာ၊ ဆယ်ကျော်သက်ညီမငယ်လေးတွေ ဆေးလိပ်စမ်းသောက်ကြည့်တတ်တာ ဒါမှမဟုတ် မမကြီးတွေ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အရက် ဆေးလိပ်တွေ စမ်းရင်း စွဲသွားတာ၊ နေရောင်ထဲသွားတဲ့အခါ ထီး၊ ဦးထုပ်မပါ ၊ နေလောင်ခံခရင်မ်မလိမ်းဘဲ ခပ်ကြာကြာနေမိတတ်တာ၊ အသင့်စား စားစရ...
မိန်းမသား တစ်ယောက်ရဲ့ အလှဟာ မျက်နှာ အသားအရေ၊ကိုယ်ခန္ဓာ ကောက်ကြောင်း၊ ဆံပင်တွေလို့ပဲ သတ်မှတ်တတ် ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရား မဟုတ်သေးပါဘူး။ လှပကြော့ရှင်းတဲ့ လည်တိုင် ရဲ့အလှတရား နဲ့ ပေါင်းစပ် လိုက်မှသာ ပြည့်စုံတာပါ။ လည်တိုင် တစ်လျှောက်က တွန့် နေတဲ့ အရေး အကြောင်းတွေ နဲ့ အစက်အပြောက် တွေရှင်းလင်းမှု မရှိတာကလည်း အလှတရား ကိုဖျက်ဆီးနေ တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်း အရေ ပြားတွေ တွန့်လာရခြ...
အပင်မှရရှိသော ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကလေးများ
ရှားစောင်းလက်ပပ် (က) ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်၏ဂျယ်လီ(အနှစ်)ထဲတွင်ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ် တစ်မျိုးက အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်များကို အလိုလိုပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် မီးလောင်နာ၊ အရေကြည်ဖုနာ၊ ထိခိုက်ရှနာ၊ နေလောင် ဒဏ်ရာတို့ကို ကောင်းစွာ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲစိတ်အနာ ချုပ်ရိုးများကိုတော့ အနာကောင်းစွာ မကျက်သေးခင်မှာ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။ အနာကျ...
အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေကတော့ သူ့ရဲ့ မူလအခြေခံအသားအရေမှာကို သိသာစေပါတယ်။ မျက်နှာသန့်စင်ပြီးစ အချိန်မျိုးမှာတောင် မျက်နှာပြင်မှာ အဆီ အနည်းငယ် ရှိနေတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နေ့လယ်လောက်မှာဆိုရင် တော့ အဆီဟာနည်းနည်းပိုများလာတယ်လို့ ခံစားရပြီး နေ့လယ်ကျော်သွားတဲ့နောက်ပိုင်း မှာaတာ့ အဆီတွေဟာ ပိုမိုများပြားလာပါပြီ။ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေဟာခြောက်သွေ့ တဲ့အသား အရေလိုမျိုး ထိခိုက်လွယ်မှ...
ပေါင်းစပ်အသားအရေမှန်း သိသာစေတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကတော့ သင့်မျက်နှာပြင်ရဲ့ ပါးပြင်နေရာများဟာ ခြောက်သွေ့နေပြီးT-zone နေရာ (နဖူးနှင့်နှာခေါင်း တစ်လျှောက်) တွေမှာ တော့ အဆီတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ပေါင်းစပ်အသားအရေ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာ သေချာပါပြီ။ အသားအရေကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်း နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေအမျိုးအစား ကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အသားအရေ နှင့် အလိုက်...